အကောင်းဆုံးစတစ်ကာသည် WhatsApp အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည် (+1.000 စတစ်ကာများ) Androidsis
Manuel Ramirez | | Android application များ, လဲ tutorial, Whatsapp
WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများတရားဝင်ရောက်ရှိလာပြီ မင်းကိုပြတယ် WhatsApp အတွက်အကောင်းဆုံးစတစ်ကာများ သင်၏တစ်နေ့တာ၌သင်၌ရှိခဲ့သောစကားဝိုင်းအားလုံးကိုသက်ဝင်စေရန်သင်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှတပ်ဆင်နိုင်သည်။
တရားဝင် WhatsApp ၏စတစ်ကာများအပြင် chat app လည်းရှိသည် ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်သလောက် install လုပ်ခွင့်ပေးတယ် Android အကြောင်းအရာစတိုးမှ (သင်လုပ်ရမည်ကိုသတိရပါ။ ) WhatsApp ကို Google Play တွင်အခမဲ့ရယူပါ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ရန်၊ သင့်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းမရှိသေးပါကဒီမှာလုပ်နိုင်သည် WhatsApp APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ).
1 ဘယ်လို Sticker Pack တစ်ခုကိုထည့်မလဲ
2 WhatsApp အတွက် Stickers ၁၀ ခု
3 BigMoji -စတစ်ကာများ
4 Throne Stickers ၏ဂိမ်း
7 WAStickers ကိုကြည့်ပါ
8 Google ၏ Allo Marshmallow
11 PUBG ပရိတ်သတ်များအတွက်
12 Fortnite စတစ်ကာများ
13 Rick နှင့် Morty
15 WhatsApp အတွက် Anime Stickers
18 Emoticons တွေကိုချစ်တယ်
ဘယ်လို Sticker Pack တစ်ခုကိုထည့်မလဲ
WhatsApp အတွက်စတစ်ကာအစုံအလင်စာရင်းကိုခင်ဗျားကိုမပြခင်သွားကြစို့ သူတို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုသင်ပေးရန်။ ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်း ၂ ခုရှိတယ်။
ကျနော်တို့ WhatsApp ကို chat နှင့်စတင်ခဲ့သည် emojis ပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ.
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် emojis, GIFs နှင့်အသစ်တစ်ခုအတွက်စတစ်ကာများအတွက်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
စတစ်ကာများကိုနှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောစတစ်ကာများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုမျက်နှာပြင်နှင့်ငါတို့နှင့်အတူ tab တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသော "ပိုများသောစတစ်ကာများကိုရယူပါ" ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
ကျနော်တို့ကတစ်ခု install လုပ်ပါကဖွင့်လှစ်။
ဥပမာ Meep WASTickers ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ထိုခလုတ်သည်ပေါ်လာလိမ့်မည် "WhatsApp ကိုထည့်သွင်းပါ"။ ကျနော်တို့ကနှိပ်။
ငါတို့သည် စတစ်ကာများကိုတပ်ဆင်ရန်အခြားနည်းတစ်နည်း WhatsApp ကိုအပေါ်:
Google Play စတိုးဖွင့်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်« My Stickers »ကိုသွားလျှင်၊ ကျနော်တို့ installer စတစ်ကာများစာရင်းတစ်ခုလုံးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ငါတို့ကိုယ်စား။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp အတွက်အကောင်းဆုံးစတစ်ကာများနှင့်အတူသွားသည်။
WhatsApp အတွက် Stickers ၁၀ ခု
တယ်လီဂရမ်မှဤသည်လာသည် WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများပါရှိသည် Durov chat app တွင်လူကြိုက်များမှုများစွာပါ ၀ င်သည်။
WA အတွက် Sticker Pack 10 ခု
ဤလှည့်ကွက်များဖြင့် ဖျက်လိုက်သော WhatsApp မက်ဆေ့ချ်များကို မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။
ဒီစတစ်ကာများဟာထင်ရှားပါတယ် သူအပေါငျးတို့သ emojis ချဲ့ ငါတို့များသောအားဖြင့်သုံးတာ သငျသညျ Emoji မျက်မှန်ကြီးမားပုံပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသော။
Throne Stickers ၏ဂိမ်း
အတွက် တီဗီစီးရီးပရိတ်သတ်တွေ Tyrion Lannister စသည့်စီးရီးများမှလူသိအများဆုံးဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သည့်ဤအရည်အသွေးမြင့်အထုပ်။
စတစ်ကာများ သူအပေါငျးတို့ memes အများစုခေတ်ရေစီးကြောင်း ဘယ်သူ့ကိုမှငါတို့နှင့်များသောအားဖြင့်ရယ်မောနှင့် trolls ။ WhatsApp အတွက်အကောင်းဆုံးစတစ်ကာတစ်ခုအနေဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော pack တစ်ခုဖြစ်သည်။
WhatsApp အတွက် Memes စတစ်ကာများ
ရေးသားသူ: candybytes GmbH
ထိုသူတို့မလွတ်နိုင်ဘူး ကောင်းသောဟomerရှိသည်ဖို့ Simpsons အဆိုပါအရယ်စရာအကောင်းဆုံး pose နှင့်အတူမိမိအရာလုပ်နေတာ။
Android အတွက် WhatsApp တွင် တည်နေရာအတုကို မည်သို့ပေးပို့ရမည်နည်း။
Are ကြီးမားတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် emojis? ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး chat app ထဲသို့သူတို့ကိုထည့်ရန်သူတို့ကိုရှိသည်။
Google ၏ Allo Marshmallow
ဤရွေ့ကားစတစ်ကာများအလွန်ကြီးစွာသောအရည်အသွေးဖြစ်ကြောင်းနှင့်လာကြ၏ အဆိုပါမရှိတော့ Allo app ကိုမှ အကြီးအ G. ၏
WhatsApp များအတွက် Marshmallow စတစ်ကာ
တဖန်သင်တို့အဘို့အအချို့သောစတစ်ကာများကိုလက်လွတ်မနိုင် မွေးနေ့ဂုဏ်ပြုလွှာ နှင့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ၏အခြားစီးရီး။
WhatsApp ၏စတစ်ကာများကိုမထည့်ပါ ခွေးများနှင့်ကြောင်များ ငါတို့ကိုသတ်တယ်။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။
Dogs နှင့် Dogs ကပ်ခွာများ
ရေးသားသူ: Viko & Co
တစ်ဦးနှင့်အတူ ပြီးခဲ့သည့် update ကိုရက်ပေါင်း, အတွက် PUBG မိုဘိုင်းပရိတ်သတ်များ.
ရေးသားသူ: 4K ထုတ်လုပ်မှု
ဒီ pack ကို ဖက်ရှင်ဂိမ်းတစ်ခု၏ပရိသတ်များသန်းပေါင်းများစွာ နှင့် ဤကဲ့သို့သောသတင်းနှင့်အတူ updated ဖြစ်ပါတယ်.
သင်စတစ်ကာများကိုလက်လွတ်မပေးနိုင်ပါ Rick နှင့် Morty နှင့်အတူ WhatsApp ကို။ ဒီသဲကန္တာရဇာတ်လမ်းတွဲဟာရယ်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်ပါ ၀ င်တယ်။
သင်တစ် ဦး အထုပ်ထဲမှာရှိချင်လျှင် ခေါင်းစဉ်များစွာသောအမျိုးမျိုးဒီတစ်ခုကမင်းအတွက်
WhatsApp အတွက် Animated Stickers - WAStickerApps
ရေးသားသူ: ကုဒ်များ Generate
WhatsApp အတွက် Anime Stickers
အတွက် anime ပရိတ်သတ်တွေကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံး WhatsApp packs များကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ မရှိမဖြစ်။
လူကြိုက်အများဆုံးဝတ်ဆင် Emojis ခရစ်စမတ်အတွက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းလာမယ့်သောဤရက်စွဲများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
ခရစ္စမတ် Emoji ရယ်စရာစတစ်ကာ
ဒီဗူး ၎င်း၏အလွန်ကြီးစွာသောအမျိုးမျိုးထွက်ရပ် နှင့်အခမဲ့ကမ်းလှမ်းသောစတစ်ကာများအားလုံး၏အရည်အသွေး။
ငါတို့သည်စာရင်း၏ပြီးဆုံး WhatsApp အတွက်အကောင်းဆုံးစတစ်ကာများ အများအပြားနှလုံးသားများတစ်ဗူးနှင့်အတူ။
WAStickerApps သည် Whatsapp အတွက်စတစ်ကာများကိုနှစ်သက်သည်။
အ WhatsApp က c အတွက်အကောင်းဆုံးစတစ်ကာများသူအပေါငျးတို့ chats သက်ဝင်လှုပ်ရှားဖို့ရာနှင့်အတူ။ စကားမစပ်၊ သူသင်ပေးတဲ့ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖရန်စစ်စ်၏ဗီဒီယိုပြခန်းကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနဲ့ WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာတွေလုပ်နည်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » WhatsApp အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့စတစ်ကာများ